Ecamm Live: Unofanira-Kuva NeSoftware yeYese Rarama Streamer | Martech Zone
I’ve shared how I had assembled my home office yekushambadzira mhenyu uye podcasting. Iyo posvo yakanga iine ruzivo rwakadzama pamusoro pehardware yandakanga ndaunganidza… kubva padhesiki rakamira, mic, mic ruoko, odhiyo michina, nezvimwe.
Nguva pfupi yapfuura, ndanga ndichitaura neshamwari yangu yakanaka Jack Klemeyer, a yakasimbiswa John Maxwell Coach uye Jack akandiudza kuti ndaifanira kuwedzera Ecamm Rarama kune yangu software yekushandisa tora kutora yangu yehupenyu kutenderera kumusoro notch. Iyo software yakanyatso kupenya, ichikugonesa iwe kuti ugadzire chaiyo kamera pane yako system uko iwe kwaunogona kuve nechero nhamba yekuwedzeredzwa kwekurarama kutenderera.
Ecamm Rarama Demo
Here’s a great overview video from the Ecamm Rarama vanhu pachavo…
Ecamm Live Zvirimo Sanganisira
Kamera Zvishandiso - Stream uye shandura maonero muH HD mhando uchishandisa chero yakabatana USB kamera, laptop kamera, DSLR, kana isina girazi kamera.
Vhidhiyo Inputs - Stream Blackmagic HDMI inobata zvishandiso, iPhone, uye Mac kugovana screen.
Audio Inputs - Shandisa chero maikorofoni yakabatana kuti upe odhiyo.
Tsigiro ye4K - Rekodha uye nhepfenyuro mukristaro yakajeka 1440p uye 4K.
Green Screen - Chinja yako yekumashure neyavo studio-yemhando girini skrini ficha.
Kufukidzira - wedzera zvinyorwa, kuverenga pasi, maonero evanoona, akadzika matatu, uye magiraidhi senge logo yekambani kune yako livestream.
Yechokwadi-nguva Kuongorora - Tarisa nhepfenyuro yako pachiratidziro chakabatana.
Saved Scenes - unogona kunyora zvisati zvaitika, uzere nemazita e-screen uye split skrini. Izvi zvauya zvinondibatsira, uko kwandinogona kuve nezviono zveumwe neumwe wemabhizinesi angu.
Kugovera Screen - Raramisa mharidzo dzako, dzidziso, uye madhemoni nekukosha kamwe chete. Sarudza kugovera skrini yako yese, kana kungoita imwe app kana hwindo. Wedzera kurarama pikicha kunhepfenyuro yekubata wega.
Skype Kubatanidzwa - ita zviri nyore kupatsanura-screen kubvunzurudza uchishandisa Skype vhidhiyo kufona, uye iwe uchaona vashanyi vako vachiratidza kunge kamera masosi muEcamm Live.
Kudzorera - kusangana pamwe neRestream.io uye switchchboard Live zvinoreva kutenderera kurarama kune akawanda mapuratifomu panguva imwe chete zviri nyore sekukanya kamwe chete. Uye nerutsigiro rwakavakirwa-mukati rweRestream's chat aggregation, Ecamm Live inogona kunyange kuratidza hurukuro dzekutaura kubva pamapuratifomu anopfuura makumi maviri.
Play Video - Tepfenyura vhidhiyo faira rezviziviso uye pre-rekodhi zvikamu.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwandiri ndechekuti Ecamm Live ine zvisingaite zvekutonga kuti ndikwanise kugadzirisa yangu Logitech BRIO webhu kamera zoom & pani, kupenya, tembiricha, tint, kuzadza, uye gamma kusefa.
Tanga NEMAHARA neEcamm Live
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Ecamm Rarama neAmazon uye ndiri kusanganisira izvo zvinongedzo mune ino posvo!
Tags: tsika yekuyerera kiyifacebook liveFacebook live kutendereraFacebook inoyereralinkedin live kutendereralinkedin kutendereralive streamlogitech briopasi-chetatudzokororarestresh.iokumhanyirakutenderera softwareswitchboard raramapfuratwitch live kutendererakutenderera kutendereravhidhiyo inowanikavhidhiyo kutenderera softwareYouTube inorarama kutendereraYouTube inoyerera